Xog: Isbitaalka ugu wayn Muqdisho oo qarka u saaran inuu u xirmo is qabsi dhinaca Maamulka ah. – Hornafrik Media Network
Isbitaalka Madiino ee Muqdisho oo ah Isbitaalka ugu wayn ee loogu adeego Shacabka Muqdisho ayaa hadda qarka u saaran inuu u xirmo isqabsi dhinaca Maamulka ah. Waxaana Isbitaalka hadda ka jira Xaalad jahwareer ah oo shaqooyinka Isbitaalka qaarkiis ay istaageen.
Xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii Agaasimaha Isbitaalka Madiino, Dr Maxamad Yuusuf oo xil ka qaadis ku sameeyay Madaxa Qaybta Caafimaadka Isbitaalkaasi, Duniyo Maxamad Cali, Waxayna Duniyo ku gacan sartay Xil ka qaadista lagu sameeyay, iyadoo ku tilmaantay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Maleeshiyaad ku qabiil ah Duniyo ayaa soo buux dhaafiyay Isbitaalka, kadib markii Saaka la bixiyay amar ah inaysan soo gali karin, Waxayna u adeegsatay Awood Ciidan inay ku soo gasho Xafiiskeeda, taasoo qalqal xooggan ka dhex abuurtay Isbitaalka.
Isbitaal Madiino oo ah Isbitaal ay leeyihiin Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed ayaa hadda waxa uu ku shaqeeyaa Hab Isbitaal Shacab, iyadoo aysan maamulin Ciidanka Booliska, Waxaana Isbitaalka dhinaca Mushaaraadka, Daawadda iyo Qalabka ka caawisa Hay’adda ICRC.
Boqolaal Bukaan ah oo u badan Dhaawacyo ayaa hadda lagu dawaynayaa Isbitaal Madiino oo ah kan kaliya ee laga heli karo Adeeg Caafimaad oo Lacag la’aan ah. Waxaana haddii Xiisadan aan loo helin xal dhici karta in Isbitaalka uu xirmo.
Agaasimaha Isbitaalka, Dr Maxamad Yuusuf waxa uu horay sidan oo kale xilka uga qaaday Ku Xigeenkiisii, taasoo buuq badan ka dhashay. balse ugu dambayntii markii ay Dawladda Somalia soo faragalisay ay ku qancisay Agaasime Ku Xigeenkii Xilka laga qaaday inuu isaga tago Shaqada, si hawlaha Isbitaalka uusan caqabad ugu noqon.
Madaxweyne Farmaajo oo booqasho rasmi ah ay uga bilaabatay dalka Masar